Allgedo.com » 2011 » February » 03
Home » Archive Daily February 3rd, 2011 Yaa u maqan Soomaaliya? By Xildhibaan Dr. Cabdiwahab Ugaas xuseen Ugaas Khaliif Feb 3, 2011 Waxaa la soo gaadhay waqtigii dadka soomaliyeed ay kala dooran lahaayeen in ay ku sii jiraan dhibtii iyo duligii 20-sano iyo kabadan lagu soo jiray iyo in ay qaatan go’aan mideeysan oo looga baxo dhibka iyo dawlad la’aanta.
Waxaa la soo maray mar xalado badan oo lagu tijaabiyey soomaaliya ha ka danbeeyaan soomalidii siyaasada hor boodeysay ama wadamada daneeye soomaaliya.
Waxaa si cad aan... War Saxafadeed: Khayaano Qaran Shirkii Adis-Ababa ee ka dhacay caasimadda dalka Itoobiya – By Xisbiga Shacabka Soomaliyeed (X.S.S) Feb 3, 2011 Asalaamu Caleykum Waraxmatulahi Wabarakatuhu dadweynaha Soomaliyeed meel iyo waa aad joogaanba. Waxaa mahad oo dhan idilkeed iska leh ALLE subxana watacala. hadaba, walaalayaal waxaa sharaf u ah in Xisbiga Shacabka Soomaliyeed (X.S.S) uu idiin soo gudbiyo amaba idinla socodsiino in Kooxdii Imbagheti iyo garabka lagu magacaabo Mucaaradka Djibouti ay ku fashilmeen waxii ay ugu magacdareen dowladwadaaga... Somaliland oo xaqiijisay in beesha Caalamka ay qabanayso Shir Dib u Heshiisiin Soomaalida ku wajahan. Feb 3, 2011 Maamulka isku magacaabay Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in dalka dibadiisa ay ka socdaan abaabulo lagu doonayo in mar kale lagu qabto shir la’isugu keenayo dhinacyada isku haya Soomaaliya.
Shir Jaraa’id oo uu galabta magaalada Hargaysa ku qabtay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar ayuu ku sheegay in beesha caalamka ay soo gaarsiisay casuumada shir loo qabanayo... Dagaalo Mar kale ka dhacay duleedka degmada Guriceel Feb 3, 2011 Xaaladda degmada Guriceel ee gobolka G/gaduud ayaa degan kadib dagaallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha degmada iyo duleedkeeda kuwaasi oo dhaliyay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah.
Wararka ka imaanaya Guriceel ayaa sheegaya in saaka dagaal kooban ka dhacay halka loo yaqaan Dhagaxyaale oo duleedka Guariceel dhacda, dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidanka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin... Shaqaalihii Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo la kala diray iyo kuwo ajnabi ah oo la howl geliyay Feb 3, 2011 Muqidhso, Somalia (AOL) – Shirkadda SKA ee dhawaan la wareegtay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa bilaawday in ay isku balaariso maamulida garoonkaasi.
Saraakiil katirsan shirkadda SKA ayaa shalay gelinkii dambe kala diray shaqaalihii garoonka diyaaradaha Muqdisho waxayna garoonka ka shaqa geliyeen shaqaalo ajaanib ah oo khaas u ah SKA.
Mid kamida shaqaalaha garoonka Muqdisho... Warar kala gedisan oo kasoo baxaya dil xalay ka dhacay Mandheera. Feb 3, 2011 Mandhera, Somalia (AOL) – Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil xalay degmada Mandheera ee gudaha Somalida Kenya kaasi oo loo gaystay sarkaal katirsanaa dowladda KMG ah.
Saraakiisha maamulka Mandheere ayaa saxaafadda u xaqiijiyay in kooxo hubaysan ay gudaha degmadaasi ku dileen Macalin Jiis oo dowladda KMG ah ugu magacaawnaa degmada Waajid gobolka Bakool.
Sida wararku sheegayaan rag bastoolado... Dowlada KMG ah oo war saxaafadeed soo saartay Feb 3, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Waxaa maanta shir isugu yimid Golaha Wasiirada Xukuumadda FKMG ah ee Soomaaliya iyadoo uu shir gudoominayay R/wasaaraha Xukuumada FKMG Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo, iyadoo looga dooday Shirka qodobo badan.
Ugu horeyntii Golaha Wasiiradu wax ay ka doodeen qormo ay soo gudbiyeen guddi heer Wasiirro ah oo hore loogu xilsaaray kuna saabsanaa habraaca howlaha kala guurka... Radio Allgedo/ Waraysiyo